Mahambo Fenerive Est : Rendrika ny sambo Atlantis II -
AccueilRaharaham-pirenenaMahambo Fenerive Est : Rendrika ny sambo Atlantis II
09/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nisy fahasimbany ny paompy mitroka solika mampandeha ny sambo MS Atlantis II, ka nitarika ny fahavoazana ho azy. Teo amin’ny sisin-dranomasin’ny Mahambo, Fénerive Est no nisehoan’izany ny alin’ny talata hifoha alarobia. Vokany, potika tanteraka ny sambo. Dibo-drano ihany koa entana noentiny.
Mitondra entana moa ity sambo ity, ka mahatratra 170 taonina ny lanjan’ny enta-madinika isan-karazany sy kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro nentiny. Izy no mamatsy ireo faritra manodidina saro-dalana amin’iny faritra Analanjirofo iny, ka miainga avy any Toamasina ny entana hoentiny. Feno rano avokoa ny vary, ny simenitra sns …noentiny. Niraraka eran’ny ranomasina ny labiera maro izay tao anatin’ilay sambo.
Raha ny fanazavana azo, dia vokatry ny faharatsian’ny toetr’andro tampoka tamin’io fotoana io no nahatonga ny loza. “ Tao anatin’ny alina tanteraka ihany koa no niseho ny loza, ka niady irery nanao izay nanavotana aina ny mpandeha tao anatiny”, raha ny fanazavana azo. Tsy nisy kosa ny aina nafoy. Efa mandray an-tanana mijery ifotony an’izao tranga izao ny tompon’andraikitra any an-toerana. Misy fiantraikany amin’ny fampandehanana ny famatsiana entana ho an’ny mponina amin’iny faritra iny mantsy ny loza nahazo ity sambo mpitatitra entana ity.
CENI : Hampivory ny mpanao politika
Vietnam-Madagasikara : Hamafisina ny fifanakalozana amin’ny sehatra fampandrosoana
Tetikasa Lalan’ny landikely : Hampiasa vola 29, 6 miliara Ariary ny sinoa